मायाको साथी – here i am.
Sep 22 2017 22 Sep 2017
कुरा त्यति बेलाको हो जब म टुटेर छरपस्ट थिए र तं आइ भनिस् “पिर नलि म छु” कुरा त्यति बेला को हो जब हामी साथिबाट अलि खास साथि बनेका थियै ।
अनि उ मलाई संगाल्दै भन्थयो अब त म छु नि यार कुरा त्यति बेला को हो जब मनमा साना-साना मायाका टुसा पलाउन थालया थियो र उ भनथियो तेरो खुब याद आउँछ यार ।।
कुरा त्यति बेला को हो जब उसले हामी साथि मात्र हैइनै त खास छस मेरो लागि भन्दथियो । कुरै कुरामा कति बेला मायाका टुसा फुल भयर मगमगाऊन थालेछन् पतै पाईन ।
कुरा त्यति बेला को हो हामी संगै खुब सारा कुरा गरथियै र देखथियै एकै सपना , र उ भन्थियो कहिले आउँछस मलाई भेट्न ।।
कुरा त्यति बेला को हो जब उसले सोधेको थियो मैले तलाई खुसि दिन सकिन भने तेरा सपना पुरा गर्न सकिन्छ भने ? र म आँखा भरि आँशु लिएर भनथे माया गर्छस नि मलाई हैन?
कुरा त्यति बेला को हो जब हामी कोसै पारि थियै मनमा अनगिन्ती माया र मस्तिस्कमा हजारौं सपना र भेटको परखाईमा रहिरहनथियै ।।
कुरा त्यति बेला को हो जब हामी नबोलि बस्नै सकदैन थियै र अचानक हाम्रो मायाका किरणमा बादल लाग्न थाल्या थियो, उसको सोर सुन्न कयै दिन प्रतिछया गर्नु पर्ने उसले मिठो बोलेको सुन्न कयै समय तडपिनु पर्न ।
कुरा त्यति बेला को हो जब हामी कति गफ गर्थै र सपना बिपनामा उसंगै पाउथे आफुलाई । हजारौं सपना र बाचा कसम लोलाएर बसिरहेका थिय र म संगालेर राख्न खोजिरहेको थिए । कता कता बाट हाम्रा बाचा कसममा खिया लागदै गएका थिए गल्ति तेरो मात्र पनि होइन गल्ति मेरो मात्र पनि होइन । गल्ति हाम्रै थियो या थियो गलत समय ।।
कुरा त्यति बेला को हो जब उसका चाहाना मेरा र उसका सपना मेरा सपना भएका थिए।। कुरा त्यति बेला को हो जब हामी हाम्रा सा-साना बाहानाले टाढिदै गएका थियै । मैले गरेका कुरा उसलाई चित्त नबुझे र उसका कुरा मलाई । हामी फेरि अनजान हुन आटेका थियै ।।
कुरा त्यति बेला को हो जब अचानक उसले कल गरेर भन्न लाग्यो…… मलाई जिन्दगीबाट केही चाहिदैन बस तंहिले साथ दिथ पुग्छ र जिन्दगी भर नछुट्ने बाचा कसम खाएका थियौं हामिले । “कसम तं मेरो छेउमा भको भए तेरो काँधमा सिर राखेर घन्टै रुनछु “भनदै गर्दा म पगलियर महिन भएकि थिए ।। याद छ तलाई तैले मेरो जन्म मिति गोत्र सबै सोधेर भनेको थिइस ल अब छ बर्ष पछि बिबाहा गर्नु पर्छ । म हतारेकी त थिहिन बस सोचदा नै मन फुरुङ्ग भएको थियो।।
कुरा त्यति बेला को हो जब हामी बिच माया भन्दा धेरै झगडा हुनथै तर पनि मेरो माया बढिरहयो । तेरो मनमा के छ तहिलाइ थाहा होला ।। भनिन्छ नि मन भरियसि मान्छे आफै टिढिनछन् रे । त्यहि त भएको हैन??
कुरा त्यति बेला को हो जब उसले एउटि केटीको फोटो पठाएर भन्यो हेर मेरि गल फेयनड कसम बहुत आतियको थिए ।। उसले भनेको थियो हामी बिच सबै सकिसकयो र म अर्ध पागल भए ।।
कुरा त्यति बेला को हो जब उसले भनेका कुरा र गरेको ब्यबहार बाट म थाकिसकें थिए चाहाना त मेरो नि थियो उसको जन्मदिनमा उसंगै रमाइलो गर्ने तर परिस्थिति एसतो भइदियो कि मैले चाहेर पनि केही गर्न सकिन् र उसलाई उपहार स्वरुप केबल ति माया र अनगिन्ती समझना दिन चाहे र उसलाई यो बन्दन बाट मुक्त पारिदिए ।।
कुरा त्यति बेला को हो जब म आफुभन्दा धेरै उसलाई माया गर्न थालीसकेको थिए, तर कता गए उसका ति बाचा र कसम, कता गए ति निस्चल मायाका किरणहरु?
कुरा त्यति बेला को हो जब मैले सोधे मेरो याद आउँदैन??
उसले नाइ भन्यो मेरो माया लाग्दैन?
•••• लाग्दैन मैले फेरि मेरो कसम खाएर भन त ?
उ : त कोनै होस ? र तेरो कसम खाएर भन्नलाई खालि आउँछ तनाब दिन
😢 मैले पनि सोच बनाए कति बाक्क लाउनु र आब उ बाट निकै टाढा जिने आफै संग बाचा गरे ।।
मेरो जिबनतबाट अब चाहेर वा नचाहेर कसै गरेपनि तेरो नाम मेटिने छैन ।। तलाई दिक्क पनि लगाउने छैन कसै गरि यो पढि हालिस भने तलाई धेरै माया अनि समझना ❤
म तेरो जिवनमा नभनि त सधै तं मेरो जिवनमा हुनेछस ।। मेरा गल्ति के यिए त याहा छैन तर प्लिज मलाई माफ गरदे ।। 😣
तलाई माया गर्ने र गरिरहने मान्छे SD☻
22 Sep 2017 at 12:57 pm
Ramro story nice ! 😊
Thank you read our other stories too.
Som adhikari says:
24 Sep 2017 at 2:39 pm
नबुझी लाएको माया प्राय एस्तै हुने गर्छ, तेसैले माया के हो भनेर बुझ्नु जरुरी छ ।
Anyway nice story😂😂